Tonizia: Niharan’ny Herisetran’ny Polisy Ilay Bilaogera Lina Ben Mhenni · Global Voices teny Malagasy
Tonizia: Niharan'ny Herisetran'ny Polisy Ilay Bilaogera Lina Ben Mhenni
Voadika ny 09 Aogositra 2012 3:51 GMT
Raha nikasa hanatrika fihetsiketsehana milamina tao andrenivohitry Tonizia ilay mpikatroka sady bilaogera Lina Ben Mhenni tamin'ny 5 Aogositra 2012 lasa teo, tsy noeritreretiny mihintsy fa hoavy hanao herisetra aminy ireo izay lazaina fa tokony hiaro ny lalàna sy ny filaminana [polisy]. Nanafika azy ny polisy 10 tamin'ireo.
Tao amin'ny lahatsoratra bilaogy mitondra ny lohateny hoe “Notafihan'ny Polisy” (misy amin'ny teny Frantsay, Arabika ary teny Anglisy), Ben Mhenni nitantara ny nahazo azy. Nampahatsiahy azy ny tamin'ny Desambra 2010 ny zava-nitranga, fotoana nahitana ny fandrosoan'ny revolisiona Toniziana tao amin'ny fireneny, talohan'ilay antsoina hoe Lohataona Arabo, izay nanery ilay mpanao didy jadona Zine Al Abedine Ben Ali hiala eo amin'ny fitondrana
Hoy izy nitantara:
Tamin'ny 9.30, nanapa-kevitra ny hivoaka izahay ary hanomboka ny fihetsiketsehana ao amin'ny toerana malalaka eo anoloan'ny teatra Monisipaly. Teny amboalohany, niezaka nanaparitaka anay ny polisy, nolazain'izy ireo fa noho ny firenena latsaka an-katerena “état d'urgence” no anton'izany- ka tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny telo eny amin'ny toeram-bahoaka. Arak'izany, nanapa-kevitra ny hifindra eny amin'ny toerana akaikin'ny Ministeran'ny Atitany izahay no sady mihira ilay teny filamatra hoe: “Oh Mifohaza ry vahoaka, hangalarin'i ” Nahdhaouis” ny volantsika”. Nanafika anay ny polisy. Nirifatra tao anatin'ny vahoaka ireo polisy nitondra moto mba hanaparitaka anay. Toy ny fanafihana rameva ao amin'ny kianjan'i Tahrir, ao Kaire ny fisehoan'ny fanafihana. Teo akaikiko i Rym El Benna raha nisy nidaroka tampoka ny lohanay. Noentin'ny namanay niala teo amin'ny toerana izahay avy eo.
Saingy tsy nifarana hatreo ny tantara. Notohizan'i Lina hoe:
Tampoka teo, polisy iray (olona efa fahitako) no nisintona ahy tamin'ny sandriko ary noentina nanalavitra ireo namako aho. Nanomboka nikikiaka sy niantsoantso aho, avy eo nanaraka ny polisy roa, telo hafa indray, ary farany nitombo ny isan'ireo polisy. Niezaka mafy naka ny poketra taty amiko izy ireo saingy afaka nanohitra aho. Kanefa kosa, nihazona ahy tamin'ny tendako ny iray tamin'ireo polisy, ny roa hafa niezaka nisintona vy poketrako, ny hafa kosa faly namono sy nandrovitra ny akanjoko … …
Sary tao amin'ny bilaogin'i Lina. Notanana ny “carte-memoire-ny”, nalaina ity sary ity tamin'izy notsaboina vonjimaika teny amin'ny toera-pitsaboana.
Fotoana fohy taty aoriana vao tsaroan'i Lina ireo polisy nanafika azy. Nanamafy ireo namany fa olona teo amin'ny olona teo izy ireo.
Vao hitako fa nangalarin'ireo mpanafika ny fakàntsariko (kamerà). Nanapa-kevitra ny hiverina any amin'ilay toerana aho mba haka izany. Mbola nitohy ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy. Toy ireny alika romotra ireny ireto polisy, manevateva, mandàka, ary mampiasa kobay amin'ireo olona, norahonana tanteraka ireo mpanao fihetsiketsehana. Toy ny tamin'ny Desambra 2010 ny zava-nitranga. Fotoana fohy taty aoriana, tafaverina tany amin'ireo namana sasany sy mpanao gazety ihany ny fakantsariko, saingy tsy tao anatiny intsony ny “carte mémoire” avy eo noentina notsaboina vonjimaika teny amin'ny toeram-pitsaboana aho.
Tao amin'ny Twitter, naneho hevitra tamin-kerim-po ireo mpiserasera manoloana ny zava-nihatra tamin'i Lina.
Khalil nanontany hoe:
@kalimacher: @benmhennilina On vient d’annoncer la blessure de certains blogueurs dont Abdessalem Hamdi, Lina Ben Mhenni,… [Kapitalis]: confirmation?
Voalaza fa naratra ihany koa ny bilaogera sasany tahaka an'i Abdessalem Hamdi, Lina Ben Mhenni,… :marina ve izany?
Amira Yahyaoui naneho ny ahiahiny:
@Mira404: J’arrive pas a avoir @benmhennilina au téléphone?! Des nouvelles?!!!!
Tsy mety mahazo an'i Lina Ben Mhenni amin'ny finday mihitsy aho. Manam-baovao ve ianareo?
Nayma Charmiti nizara sombim-baovao:
كنت معاها و البوليسية ضربوها و فكولها مصورتها كيما ضربوا برشة صحفيين و سمعونا لكلام
@Nayma_M_Charmiti: Niaraka taminy aho raha tonga nanafika sy nangalatra ny fakàntsariny ny polisy, nisy ihany koa ireo mpanao gazety hafa nahazo daroka ary notevatevain'izy ireo koa izahay. #Spit
Mpanoratra ato amin'ny Global Voices Online i Lina.